Quick Jidka A inuu ka soo kabsado tirtiray ama formatted Word File on Mac
Quick Jidka A inuu ka soo kabsado tirtiray ama formatted Word File ee Mac
> Resource > Mac > Quick Jidka A inuu ka soo kabsado masaxay ama formatted Word File ee Mac
Dhaco saaro ama la formatted aad files Word aad Mac?
Weligaa aad soo gaarto ah xaaladaha dhibaato iyo niyad xumaado yar sida tan: formatted qoruhu qaar ka mid ah meesha aad ku badbaadi files muhiim Word, saaro aad files Word shil, ama xataa faylasha aad is lama filaan ah ku waayay qaar ka mid ah sababaha aan la garanayn? Kasta oo iyaga ka mid ah ka dhigi kara in aad waalan. Hadda, halkan waad raadinaya hab degdeg ah oo ka soo kabanaya files Word ee Mac. Akhri oo aad abtain doonaa waxa aad u baahan tahay.
Microsoft hadda ma bixiyaan biilasha u Word kabashada waraaqaha Mac u saamaxaya inuu ka soo kabsado files Word ayaa laga saaray, ama wax danbi ka bin qashinka, iyo formatting. Laakiin waxba ma ahan, inaad tahay in ay qaataan a utilities dhinac saddexaad qaarkood awoodin - barnaamijka Word Mac. Halkan waa talo: Wondershare Data Recovery Mac , Mac Word qalab kabashada dukumenti lagu kalsoonaan karo oo xirfadle in kaban karto, lumay, formatted, laga saaro, iyo files Word haleeli ka USB drive, Mac, drive dibadda iyo qalab lagu kaydiyo oo dheeraad ah, oo aad ku eegaan karo Hadalka content ka hor soo kabashada.
Talooyin: HA rakibi Wondershare Data Recovery in Risaalo ka mid ah meesha aad xogta laga badiyay iskaga overwriting xogta asalka ah.
Hab degdeg ah oo Word soo kabashada aad Mac
Step1. Dooro soo kabasho
Ka dib markii ay ku rakibidda iyo ordaya barnaamijka, waxaad heli doontaa suuqa kala hoose soo socda. Ka soo kabashada badiyay waraaqaha Word in aad Mac, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery", kaas oo u ogolaanaya in aad ka bogsato files saaro iyo formatted ee Mac.
Step2. Dooro drive ee scan
Dooro drive meesha aad ku badiyay waraaqaha Word aad hore oo guji "Scan" si aad u ogaato faylasha lumay. Haddii aad rabto in aad kaliya heli files Word, waxaad nadiifin kartaa natiijada scan iyadoo la isticmaalayo "Select File ture" doorasho. Intaa waxaa dheer, awood scan qoto dheer kaa caawin kara si aad u hesho files lumay dheeraad ah oo gabi ahaanba.
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan waraaqaha Word lumay
Scan ka dib, waxaad ku eegaan kara waxa ku qoran dokumantiyada Word ka hor soo kabashada. Waxaad calaameysaa kuwa aad rabto oo guji "Ladnaansho" dusheeda si loo badbaadiyo oo dhan oo iyaga ka mid ka mid ah click.
Aan: Ha xifdiyo files Word soo kabsaday oo uu meesha asalka dambe. Waxaad ka raadsan kartaa disk dheeraad ah ama xijaab kale iyaga badbaadiya, in tixgelinta Safty.
Video tutorial ah Mac-kabashada hadalka
Sida loo badalo OGG in MP3 ama MP3 in OGG on Mac OS X (Yosemite ka mid ah)
Download Clipnabber ugu fiican ee Mac Alternative